Apple dia handefa fampiharana bebe kokoa amin'ny Android | Androidsis
Apple miloka amin'ny Android ary handefa fampiharana bebe kokoa atsy ho atsy
Tamin'ny taon-dasa dia nisy iray tamin'ireo zavatra tsy nampoizina lehibe indrindra rehefa nahafantatra izahay fa hisy Apple Music amin'ny Android amin'ny fararano. Vaovao rehetra izay naneho ny fiovan'ny saina teo alohan'ny Android mba hanao ny dingana voalohany ao amin'ny rafitra fandidiana ho an'ireo fitaovana finday izay notafihana indrindra tamin'ny taona lasa. Rehefa tonga tao amin'ny Android ny Apple Music dia efa nanam-pahaizana isika fa tsy vao sambany sy ny an'ny Cupertino nibolisatra tsena lehibe izy ireo izay ananany eo alohan'izy ireo amin'ireo mpampiasa an-tapitrisany izay mampiasa smartphone Android isan'andro. Ary tsy miresaka momba ny Apple Music no fampiharana voalohany izahay, fa talohan'ny nanombohany nanangana iray hanampiana ny tetezamita avy amin'ny finday Android mankany Apple ho toy ny iray amin'ireo fanafihan'ny orinasa nanafika mafy ny Android rehefa nanomboka nampiseho ny heriny taona vitsivitsy lasa izay .
Fantatsika androany fa mahita làlana amin'ny Android i Apple ary tsy ho ela dia handefa fampiharana sy serivisy vaovao amin'ny sehatra mpifaninana toa ny nataon'i Microsoft na i Google tenany taona maro lasa izay tao amin'ny App Store. Ary azy ny azy Tim Cook izay nanambara ity vaovao ity, ka mandritra ny volana vitsivitsy manaraka na mandritra ity taona ity, azo atao ny mampiasa serivisy toa ny iCloud sy Apple Pay amin'ny telefaona Android. Iza no nilaza tamintsika taona maro lasa izay fa hahita ny Apple mandefa karazana rindranasa sy serivisy amin'ny Android izahay amin'ny fotoana hafa, hanavao azy ireo amin'ny fomba izay manana fiasa izay tsy ananan'izy ireo amin'ny telefaona iPhone na iPad. Mahagaga fa tsy misy fisalasalana ary fahombiazana lehibe ho an'ireo mpampiasa manana iPad sy telefaona Android hiasa amin'ny alàlan'ny fampiharana mitovy.
1 Ny taonan'ny endrika maro
2 Tsy fantatrao izay ho fampiharana
Ny taonan'ny endrika maro
Raha eo amin'ny kolontsaina dia manana kolontsaina marolafy isika ho toy ny fomba fanolorana sy fizarana karazan-karena rehetra amin'ny sehatra ara-tsaina, ara-javakanto na ara-tsosialy, amin'izao fotoana izao dia miaina zavatra tena mitovy amin'ny fampiharana isika serivisy sy sehatra samihafa mifangaro amin'ny isan'ny fitaovana ananan'ny mpampiasa. Iza no tsy manana takelaka Android, avy eo ny ebook Kindle na telefaona iPhone hiova farany amin'ny solosain-dry zareo PC eo ambanin'ny Windows 10. Zava-misy io fahasamihafana io ary ireo mpanjaka lozisialy dia mila mampifanaraka mba tsy hahadino ny fiaran-dalamby multiplatform.
Ananany izany Google ilay nanararaotra be handefa ireo serivisy manandanja indrindra ao amin'ny Apple App Store mandritra ny taona maro, hany ka izao i Microsoft no manome ny fitiavany bebe kokoa an'i Android handefa fampiharana be dia be, hany ka tonga tamin'ny Android ihany i Apple tamin'ny farany, ndao lazaina fa tara kely.
Raha natsipiny Mifindra amin'ny iOS toy ny fampiharana voalohany, ary ny faharoa miaraka amin'ny Apple MusicIreo rindranasa roa ireo dia niandraikitra ny fitsapana ity tsena ity mba tsy ho ela dia hahita karazana fampiharana Apple maro hafa izahay ao amin'ny Google Play Store toa ny iCloud, Apple Pay na iMessage ankoatry ny maro hafa.
Tsy fantatrao izay ho fampiharana
Azo antoka fa ireo fampiharana ireo no ilain'ny mpampiasa ahafahana miasa eo anelanelan'ny telefaona Android sy ny takelaka iPad. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mampifangaro ny takelakao amin'izay anananao amin'ny findainao nefa tsy lasa adala mitady rindranasa fahatelo izay manao io asa io ihany. Ary eo no nahatonga an'i Apple niadana ny fahatsapana fa navelany hisy serivisy hafa araraoty ny faharetany amin'ny fandefasana fampiharana amin'ny Android.
Raha tsy mahatratra ny haavon'ny Microsoft, izay saika toa izany nanadino ny OS-ny azy Amin'ny alàlan'ny fandefasana rindrambaiko tena tsara amin'ny Android sy iOS, ny zava-miafina izao dia ny app izay hivoaka amin'ny Android. Apple Pay dia mety ho iray amin'izy ireo, saingy natsangana tao anaty iOS izy io, indrindra ho an'ireo fiarovana ireo. Angamba ny roa izay ho hitantsika tsy ho ela dia ho iCloud satria mora kokoa ny fampiharana azy, ary iMessage, satria fampiharana izay mety kokoa amin'ny Apple noho ny toerana misy azy io.
Na izany aza, ny Ny fahatongavan'i Apple amin'ny Android dia tongasoa amin'ny fotoana maha zava-misy ny multiplatform ary manome kalitao bebe kokoa sy repertoire an'ny fampiharana ao amin'ny Google Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Apple miloka amin'ny Android ary handefa fampiharana bebe kokoa atsy ho atsy
Mandraisa anjara amin'ny fisarihana isan'andro ho an'ny fampiharana voaloa miaraka amin'ny fampiharana Promo Codes vaovao
Samsung Gear S2, famakafakana: Samsung dia mamely ny marika amin'ny smartwatch boribory vaovao